स्वर्गद्वारी नगरपालिका खरको छाना मुक्त बन्दै – Dainik Lumbini
स्वर्गद्वारी नगरपालिका खरको छाना मुक्त बन्दै
प्यूठान । स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएसंगै खरको छाना विस्तापित हुने भएको छ । आगामी वर्ष नै खरको छाना मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने योजना अनुरूप काम भइरहेका नगरपालिकाले जनाएको छ । खरको छाना मुक्त गर्ने उदेश्यका साथ सुरु भएको उक्त कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको नगर प्रमुख नेत्रबहादुर रोका क्षेत्र बताए ।
करिब दुई हजार २ सय घरहरू खरको छाना भएको स्वर्गद्वारीमा करिब ७ सय घर बाँकी रहेको क्षेत्रीले बताए । ‘पहिलो हामीले थोरै खरका छाना भएका वडाबाट कार्यक्रम सुरु ग¥यो,’– मेयर रोका क्षेत्रीले भने–‘वडा नं. ४, ७, ८ र ९ लाई पहिलो वर्ष वितरण गरेका थियो भने दोस्रो वर्ष वडा नं. ५ र ६ लाई वितरण गरियो ।’ उनले भने–‘यसै वर्ष बाँकी रहेका अन्य वडाका घरहरूसंगै वडा नं. ३ मा रहेका खरेघरहरूमा पनि जस्तापाता लाग्ने छन् ।’ आगामी वर्ष पनि प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर डेढ करोड बजेट छुट्टाइ नगरपालिकाका १ र २ वडामा रहेका सबै घरहरूलाई जस्ता (टिन) लगाएपछि स्वर्गद्वारी नगरपालिकालाई खरको छाना मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
गत तीन वर्ष यता नगरपालिकाको चार करोड र प्रदेश सरकारको पनि चार करोड गरी जम्मा आठ करोड लगानी भएको नगर प्रमुख रोकाले जानकारी दिए । चालु अर्थिक वर्षमा ६ सय १६ घरमा जस्ताको छाना लगाइने उनको भनाइ छ । कोरोनाको महामारी चलिरहंदा जनता आवास कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको बताउँदै यसै वर्ष वडा ३ को ७० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने बताए । घरका छाना भएका घरधनीहरूको घरको सम्पूर्ण विवरण ल्याइसकेको हुँदा वितरणमा त्यस्तो समस्या नभएको उनले बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रको फूटबल उकास्दै फर्साटिकर कप